ओलीले एकलौटि गर्न थालेपछि एमालेबाट तेस्रो पुस्ताका नेताहरु विद्रोह गर्ने तयारी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ओलीले एकलौटि गर्न थालेपछि एमालेबाट तेस्रो पुस्ताका नेताहरु विद्रोह गर्ने तयारी !
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच फेरि विवाद सुरु भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर एमालेमा फर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अध्यक्ष ओली पुनः एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्न थालेको भन्दै असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।
यसले गर्दा फेरी एमालेबाट दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था आउँन सक्ने देखिएको छ ।
९ भदौमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील गराउने निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरे पनि अध्यक्ष ओलीमाथि एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लागेको छ । राजधानी दैनिकबाट